Guud ahaan kulammada maanta iyo caawa laga ciyaari doono shanta horyaal ee ugu waa weyn qaaradda Yurub ee EPL, Serie A, La Liga, Bundesliga iyo Ligue 1 – Gool FM
(Yurub) 19 Okt 2019. Kulammo dhowr ah oo ka tirsan shanta horyaal ee ugu waa weyn qaaradda Yurub ayaa maanta iyo caawa la ciyaari doonaa, iyadoo ay ku jiraan ciyaaro xiiso leh.
Waxaan halkaan idin kugu soo gudbinaynaa kulammada laga ciyaari doono maanta iyo caawa Shanta horyaal ee ugu weyn qaaradda Yurub ee kala ah English Premier League, Italian Serie A, La Ligaha Spain, Bundesliga Jarmalka iyo Ligue 1 Faransiiska.
Aan ku horreyno horyaalka Premier League Ingiriiska, waxaa kulammada ugu waa weyn ka mid ah kuwa ciyaari doonaan Chelsea iyo Manchester City.
Chelsea ayaa soo dhoweyn doonta 5:00 galabnnimo maanta xilliga geeska afrika naadiga Newcastle United, iyadoo kooxda uu hoggaamiyo macallin Steve Bruce ee Newcastle ay doonayso inay Blues mariso wadadii ay horay ugu dirtay Man United.
Man City ayaa dhankeeda booqan doonta naadiga Crystal Palace caawa 7:30 fiidnimo, waxaana Kooxda Sky Blue ay doonaysaa inay ka soo kabato guuldarradii ka soo gaartay Wolves.
Dhinaca kale horyaalka La Ligaha Spain haddii aynu eegno waxaa ugu waa weyn Barcelona oo duhurnimada maanta ciyaareysa iyo Real Madrid oo caawa dheeli doonta.
Barcelona ayaa booqan doonta naadiga Eibar kulan ka tirsan horyaalka La Liga 2:00 duhurnimo maanta, iyadoo maanka ku haysa inay si ku meel gaar ah hoggaanka horyaalka Spain ula wareegi karta haddii ay adkaato maadaama kulankeedu uu ugu horreeyo dhammaan kulammada maanta laga ciyaarayo horyaalka.
Dhinaca kale kooxda Real Madrid ayaa u safreysa caawa 10:00 habeennimo naadiga Mallorca.
Horyaalka Serie A haddii aynu eegnana waxaa kulanka ugu weyn ciyaari doonta kooxda xafidanaysa horyaalka Talyaaniga ee Juventus waxaana ay soo dhoweyn doontaa Bologna 9:45 habeennimo caawa.
Dhinaca kale waxaa la dheeli doona kulamo ka tirsan horyaalka Bundesliga waxaa kullamada ugu waa weyn dheeli doona kooxaha Bayern München iyo Borussia Dortmund.
FC Bayern München ayaa booqan doonta Augsburg, halka naadiga Borussia Dortmund ay soo dhoweyn doonto Borussia Mönchengladbach.
Horyaalka Ligue 1 ee Faransiiska haddii aynu eegnana kulamo dhowr ah ayaa la ciyaarayaa waxaana laga xusi karaa Lyon oo qaabilaysa Dijon iyo kooxda Lille oo booqan doonta Toulouse.
Haddaba halkaan hoose ka eeg kulammada maanta iyo caawa laga ciyaari doono shanta horyaal ee ugu waa weyn qaaradda Yurub:-
2:30 Duhurnnimo Everton vs West Ham United
5:00 Galabnnimo AFC Bournemouth vs Norwich City
5:00 Galabnnimo Aston Villa vs Brighton & Hove Albion
5:00 Galabnnimo Chelsea vs Newcastle United
5:00 Galabnnimo Leicester City vs Burnley
5:00 Galabnnimo Tottenham Hotspur vs Watford
5:00 Galabnnimo Wolverhampton Wanderers vs Southampton
7:30 Fiidnnimo Crystal Palace vs Manchester City
2:00 Eibar vs Barcelona
5:00 Galabnnimo Atletico Madrid vs Valencia
7:30 Fiidnnimo Getafe vs Leganes
10:00 Mallorca vs Real Madrid
4:00 Galabnnimo Lazio vs Atalanta
7:00 Fiidnimo Napoli vs Verona
9:45 Habeennimo Juventus vs Bologna
4:30 Galabnimo FC Union Berlin vs Freiburg
4:30 Galabnimo Augsburg vs FC Bayern München
4:30 Galabnimo Fortuna Düsseldorf vs Mainz 05
4:30 Galabnimo RasenBallsport Leipzig vs Wolfsburg
4:30 Galabnimo Werder Bremen vs Hertha BSC
7:30 Fiidnimo Borussia Dortmund vs Borussia Mönchengladbach
6:30 Maqribnimo Lyon vs Dijon
9:00 Habeennimo Angers vs Brest
9:00 Habeennimo Metz vs Nantes
9:00 Habeennimo Toulouse vs Lille
9:00 Habeennimo Nimes vs Amiens
9:00 Habeennimo Reims vs Montpellier
Horudhac: Mallorca vs Real Madrid... (Los Blancos oo sii haysan karta hoggaanka horyaalka La Liga)